ယခင်ကအခြားရွေးချယ်စရာအထက်တန်းကျောင်းလူငယ်များအကြားစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများပျံ့နှံ့မှုနှင့်အတူတကွဖြစ်ပွားမှု (၂၀၁၄) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်၌ပေါက်နေခြင်း
ပျံ့နှံ့ဟောင်းအစားထိုးအထက်တန်းကျောင်းလူငယ် (2014) အကြားစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ Co-ဖြစ်ပျက်မှု
J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2014 Apr 1;3(1):33-40.
Sussman S က, Arpawong TE, နေရောင် P ကို, Tsai J ကို, Rohrbach LA, Spruijt-Metz: D.
မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့်အလုပ်သည်အမျိုးမျိုးသောစွဲလမ်းမှုများကိုတစ်ခုတည်းသောတုံ့ပြန်မှုများမှတစ်ဆင့်အမျိုးမျိုးသောစွဲလမ်းမှုများကို သုံး၍ မက်ထရစ်တိုင်းတာမှုကို အသုံးပြု၍ စွဲလမ်းမှုအမျိုးမျိုးကိုလေ့လာခဲ့သည်။
ယခုလေ့လာမှုသည်ယခင်အထက်တန်းကျောင်းလူငယ်များအကြားစွဲစွဲလမ်းမှုအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည့်အလယ်အလတ်အရွယ် ၁၉.၈ နှစ်အကြား matrix တွက်ချက်မှုနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်သက်တာလုံးနှင့်နောက်ဆုံးရက် ၃၀ ပျံ့နှံ့မှုသည်အခြားအလုပ်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စွဲစွဲမှု ၁၁ ခုအနက်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသော (Sussman, Lisha & Griffiths, 19.8) သည်အဓိကအာရုံစိုက်ရာ (စီးကရက်၊ အရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ အစာ၊ လောင်းကစား၊ အင်တာနက်၊ စျေးဝယ်ခြင်း) ဖြစ်သည်။ , ချစ်ခြင်း, လိင်, လေ့ကျင့်ခန်း, နှင့်အလုပ်) ။ ထို့အပြင်ဤစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူနှစ်ခုမှနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောတွဲဖက်ဖြစ်ပျက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဤစွဲလမ်းမှု၏လျှို့ဝှက်လူတန်းစားဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြားအစီအမံများနှင့်အတူသူတို့၏အသင်းအဖွဲ့များကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းဤစွဲလမ်းမှုတစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက် ပို၍ ပျံ့နှံ့မှုသည် ၇၉.၂% နှင့် ၆၁.၅% အသီးသီးရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုစွဲလမ်းမှုနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောရက် ၃၀ တွဲဖက်မှုသည် ၆၁.၅% နှင့် ၃၇.၇% အသီးသီးရှိခဲ့သည်။ Latent Class Analysis သည်အုပ်စုနှစ်စုကိုအကြံပြုခဲ့သည် - ယေဘုယျအားဖြင့်စွဲလမ်းမှုမရှိသောအုပ်စု (နမူနာ ၆၇.၂%) နှင့်၊ ချစ်ခြင်း၊ လိင်၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ ။ နောက်ဆက်တွဲဆန်းစစ်ခြင်းများအရ single-response type self-reports များသည်၎င်းတို့တိုင်းတာရန်ရည်ရွယ်သည့်စွဲလမ်းမှုကိုတိုင်းတာနိုင်ကြောင်းအကြံပြုသည်။
ဤရလဒ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအနာဂတ်လေ့လာမှုများနှင့်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းအစီအစဉ်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုအပ်ပါသည်၊ သို့သော်ဤအတိုင်းအတာအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုရန် ပို၍ မှန်ကန်သောသုတေသနလိုအပ်သည်။
keywords: မျိုးစုံစွဲ, ပျံ့နှံ့, ပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှု, ငုပ်လျှိုးနေလူတန်းစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, စွဲအုပ်စုများ, convergence တရားဝင်မှု
အပြုအမူအမျိုးမျိုးကိုသုတေသီများနှင့်လက်တွေ့လေ့ကျင့်သူများကစွဲလမ်းမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည် (Demetrovics & Griffiths, 2012), ဘုံအင်္ဂါရပ်များ (ဥပမာ, preoccupation, ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးမှု) က delineated နှင့်တကယ်တော့, အမူအကျင့်စွဲအပေါ်ပထမ ဦး ဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံ, မတ်လ 2013 ခုနှစ်, ဟန်ဂေရီဘူဒါပက်စ်၌စွဲအမျိုးမျိုးသော၏တည်ရှိမှုအပေါ်သုတေသနသဘောတူညီမှုသရုပ်ပြခဲ့သည် ( ကြည့်ပါ http://icba.mat.org.hu/; Aprilပြီလ 25, 2013 ဝင်ရောက်။ ) မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အစားအစာကဲ့သို့သောအရာများအလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအရာ ၀ တ္ထုစွဲမှုများသည်အပြုအမူဆိုင်ရာ (လုပ်ငန်းစဉ်) စွဲလမ်းမှုသည်အပြုအမူများ (ဥပမာအလုပ်၊ စျေးဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်လိင်) တွင်စွဲလမ်းစေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည် (Sussman et al ။ , 2011) ။ (က) ၀ တ္ထုများနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုပျံ့နှံ့မှုနှင့် (ခ) စွဲလမ်းမှုသည်လူတစ် ဦး ၏ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည့်အတိုင်းအတာကိုပိုမိုနားလည်ရန်အတွက် (သို့) စွဲနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောတွဲဖက်ဖြစ်ခြင်းကိုသိရှိနိုင်ရန်လေ့လာမှုများပြီးစီးခဲ့သည်။ စာရင်းအင်းအရအားနည်းသောလူနည်းစု) သို့မဟုတ်လူနေမှုပုံစံစသည့် (ဆိုလိုသည်မှာအတော်အတန်ဒဏ်ခံနိုင်သောလူမှအပလူအများအပြား) ။ ဥပမာ, Sussman et al ။ (၂၀၁၁) ၁၂ လတာကာလအတွင်းစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ ၁၁ ခုနှင့်ဆိုင်သောဤမေးခွန်းများကိုဖြေရှင်းရန်နမူနာအရွယ်အစားအနည်းဆုံး ၅၀၀ ရှိသည့်လေ့လာမှု ၈၃ ခုမှအနည်းဆုံးအရွယ်အစား ၅၀၀ ပါသည့်အချက်အလက်များကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ဆေးစွဲခြင်း၊ အင်တာနက်၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ လိင်၊ လေ့ကျင့်ခန်း (သို့) အလုပ်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်လူကြီးများအကြား ၁၂ လတာစွဲစွဲလမ်းမှု ၁၂ လသည်လူ ဦး ရေ၏ ၄၇% ရှိခဲ့ပြီး ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် (နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောစွဲလမ်းမှု) တွင်တွေ့ရသည်။ သူတို့ကစွဲလမ်းမှုသည် neurobiological အားနည်းချက်ကဲ့သို့ခေတ်သစ်အထိုင်များသည့်ဘဝပုံစံ၏ပြproblemနာဖြစ်သကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟုအကြံပြုခဲ့သည်။
အဓိကအကြောင်းရင်းနှစ်ရပ်ကြောင့်လူငယ်များသည်စွဲလမ်းမှုတစ်ခုစီတိုင်း၏ကျယ်ပြန့်သောအတိုင်းအတာကို အသုံးချ၍ များစွာသောစွဲလမ်းမှုကိုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ပထမအချက်အနေဖြင့်စာရင်းအမြောက်အမြားအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အကဲဖြတ်မှုသည်အချိန်များစွာယူရသည်၊ အထူးသဖြင့်ကြီးမားသောလူငယ်စစ်တမ်းနမူနာများတွင်လက်တွေ့မကျပါ။ ထိုကဲ့သို့သောနမူနာများတွင် (များသောအားဖြင့်ကျောင်းချိန်ညှိချက်များ၌သာမကစာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းဖြင့်ပေးပို့သည့်ဖြစ်စေ) တွင်သုတေသီများသည်စစ်တမ်းကောက်ယူရန်မိနစ် ၅၀ သာခွင့်ပြုသည် (Sussman, ချို, Stacy, Burton & Flay, 1995) ။ ထို့ကြောင့်တစ်နည်းနည်းဖြင့်စွဲလမ်းမှုကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်စွဲလမ်းမှုအမျိုးမျိုး (ဥပမာ၊ အပျော်အပါး၊ နှိုးဆွခြင်းသို့မဟုတ်သက်သာစေခြင်း၊ ပျိုးထောင်ခြင်း)၊ အချိန်ကာလတိုတောင်းခြင်း၊ အလုပ်ရှုပ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်းစသည့်အမျိုးမျိုးသောစွဲလမ်းမှုအမျိုးမျိုးကိုတိုင်းတာရာတွင်မလိုအပ်သောအရာများစွာရှိသည်။ နှင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုး၏စုဆောင်းခြင်း (Sussman & Sussman, 2011) ။ ထိုသို့သောမလိုအပ်သောပမာဏကိုတိုင်းတာရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့်များစွာသောယခင်လေ့လာမှုများသည် matrix ကိုအတိုင်းအတာအဖြစ်အများအပြားဆေးစွဲဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ဤကဲ့သို့သောမိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံသည့်အတိုင်းအတာအရစွဲလမ်းမှုများစွာကိုများသောအားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်စွဲလမ်းမှုအမျိုးအစားတစ်ခုစီနှင့်အတူမက်ထရစ်ပုံစံဖြင့်စီစဉ်ထားသည်။ တစ် ဦး စွဲ matrix ကိုအတိုင်းအတာကျယ်ပြန့်မည်သည့်စွဲတိုင်းတာမထားဘူး, ထိုကဲ့သို့သောအစီအမံများ၏ validation ကိုလေ့လာမှုများကောက်ယူကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်, ဒီချဉ်းကပ်မှုလက်တွေ့ကျတဲ့, စီးပွားရေးဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကွဲပြားခြားနားသောစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုအသာပုတ်လိမ့်မည်။
ကွတ် (1987) စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုများကိုဖော်ထုတ်ရန် matrix အတိုင်းအတာကိုအသုံးပြုခြင်းအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်ပထမဆုံးသုတေသီဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ကောလိပ်ကျောင်းသား ၆၀၄ ၏နမူနာတွင်သူသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူ ၁၁ ခုအနက် ၁၀ ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့သည် (စီးကရက်၊ အရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ တရားမ ၀ င်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၊ အစာစားခြင်းမမှန်မှုများ [အဝလွန်ခြင်း၊ အနော်ရီးရှားနှင့် bulimia]၊ လောင်းကစား၊ အပိုစွဲလမ်းမှုများ (ဥပမာ၊ ကဖိန်းဓာတ်)၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးမှုများတည်ဆောက်ခြင်းတို့နှင့်အတူ [အပြေး] နှင့်အလုပ်) ။ သူသည်အင်တာနက်စွဲခြင်းကိုမလေ့လာခဲ့ပါ၊ အကြောင်းမှာလေ့လာမှုပြီးဆုံးသည့်နှစ် (ဆိုလိုသည်မှာယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်းအင်တာနက်သည်ထိုအချိန်ကမရှိခဲ့ပါ) ။ အမြင့်ဆုံးပျံ့နှံ့စွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းမှုမှာဆက်ဆံရေး / ချစ်ခြင်းမေတ္တာ (၂၅.၉%)၊ ကဖိန်းဓာတ် (၂၀.၁%)၊ အလုပ် (၁၇.၅%)၊ လိင် (၁၆.၈%)၊ ဈေးဝယ်ခြင်း (၁၀.၇%)၊ ) ။ သူသည်နမူနာ၏ ၂၃.၈% ခန့်၏လေးပုံတစ်ပုံသည်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများ၊ အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်များအားလုံးကို“ no” ကိုတုန့်ပြန်သည်။ သို့ရာတွင်သူသည်စာရင်းဇယားကိုတင်ပြသောအခါသူသည်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများ၊ မိတ်ဖက်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမငြိမ်မသက်မှုများအကြားခွဲခြားခြင်းမရှိကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ ထို့အပြင် "ယုတ္တိပြွတ်" ကိုဖန်တီးပြီးနောက်သူသည်အရက်သေစာနှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အပြေး / အလုပ်၊ ဈေးဝယ်ခြင်းမှအပစွဲလမ်းမှုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုသိသိသာသာဆက်စပ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ prosocial နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားစွဲလမ်းမှုနှင့်ခြားနားသောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောစွဲလမ်းမှုတို့အကြားဆန့်ကျင်ဘက်တစ်ခုကိုသရုပ်ပြခြင်းရှိ၊ မရှိကိုခန့်မှန်းနိုင်သည်။
အလက်ဇန်းဒါးနှင့် Schweighofer (1989)ကနေဒါကောလိပ်ကျောင်းသား ၁၃၆ ယောက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပွားလေ့လာမှုတွင်အလားတူပျံ့နှံ့မှုတွေ့ရှိချက်များကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် ကွတ် (1987) စွဲမှုနှစ်ခု (ဆက်နွယ်မှုနှင့်လုပ်ငန်းခွင်) နှစ်ခုဖြစ်သော်လည်းပျံ့နှံ့မှုသည်အခြားအမျိုးအစားများ (အသုံးပြုမှုကိုဖော်ပြသည် (စွဲလမ်းမှု၊ အပျက်သဘောစွဲစွဲမှု၊ မှီခိုမှုသို့မဟုတ်ပုံမှန်အသုံးပြုမှုကဲ့သို့)) အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပုံမှန်အသုံးပြုရန်အတွက်သာသတ်မှတ်ခြင်းသည်ပျံ့နှံ့မှုသည်ဆေးစွဲမှုအားလုံးအပေါ်ကွတ်ခ်နမူနာထက်အမှန်တကယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ Greenberg, Lewis နှင့် Dodd (၁၉၉၉)ကောလိပ်ကျောင်းသား ၁၂၉ ဦး ၏နမူနာတွင်အရက်နှင့်စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ စီးကရက်သောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောစွဲလမ်းမှု ၉ ခု (အရက်၊ ကဖိန်းဓာတ်၊ ချောကလက်၊ စီးကရက်၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ လောင်းကစား၊ အင်တာနက်သုံးခြင်း၊ ချောကလက်နှင့်နှင့်ချောကလက်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူဗီဒီယိုဂိမ်း။ အမြင့်ဆုံးပျံ့နှံ့စွဲစွဲလမ်းမှုသည်လေ့ကျင့်ခန်း (၃၀%)၊ ကဖိန်းဓာတ် (၂၉%)၊ ရုပ်မြင်သံကြား (၂၆%)၊ အရက် (၂၆%)၊ စီးကရက် (၂၃%) နှင့်ချောကလက် (၂၃%) တို့ဖြစ်သည်။ တိုင်းတာသည်။
MacLaren နှင့်အကောင်းဆုံး (၂၀၁၀)948 ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ် ဦး နမူနာနှင့်အတူ 16 စွဲအစုတခု၏အချက်ဖွဲ့စည်းပုံဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အချက် (၃) ချက်ကိုဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ထားသည် - (က) ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု (ဥပမာ၊ အတင်းအကျပ်ကူညီပေးခြင်း [ကြီးစိုး။ လက်အောက်ခံခြင်း]၊ အလုပ်၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ အစားအစာ [အငွေ့ပျံခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ ဆက်ဆံရေး [ကြီးစိုးမှုနှင့်လက်အောက်ခံခြင်း]]]၊ (ခ) ဟီဒန်ဆန် (တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၊ , ဆေးရွက်ကြီးနှင့်လိင်) အချက်များနှင့် (ဂ) နောက်ထပ် hedonistic ကဲ့သို့သောအချက် (ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါး, လောင်းကစား, ကဖိန်း) ။ အမြင့်ဆုံးပျံ့နှံ့စွဲစွဲလမ်းမှုသည်လေ့ကျင့်ခန်း (၂၅.၆%)၊ ဈေးဝယ်ခြင်း (၂၁.၈%)၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့်လက်အောက်ခံသောဆက်ဆံရေး (၁၇% နှင့် ၁၁.၉%)၊ ကဖိန်းဓာတ် (၁၆.၅%)၊ အစာခေါင်းပါးခြင်းနှင့်အငွေ့ပျံခြင်း (၁၆.၄% နှင့် ၁၄.၉%)၊ လကျအောကျခံ (25.6% ​​နှင့် 21.8%), အလုပ် (17%), ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါး (11.9%), လိင် (16.5%) နှင့်အရက် (16.4%) ။ နေဖြင့်ပုံတူကူးယူမဟုတ်သော်လည်း MacLaren နှင့်အကောင်းဆုံး (၂၀၁၀)ဤသုတေသနအဖွဲ့၏အစောပိုင်းအလုပ်များသည်ကြီးထွားလာသောနှင့်လက်အောက်ခံသောအချက်များကိုလည်းပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည်။Christo et al ။ , 2003; Haylett, Stephenson က & Lefever, 2004) ။ ဒီလေ့လာမှုနှစ်ခုကောလိပ်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများနှင့်အတူကောက်ယူခဲ့ပေမယ့် Haylett et al ။ (၂၀၀၄) PROMIS ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာသို့ (၀ င်ရောက်မှု ၃၅ နှစ်) ၅၄၃ နှစ်ဆက်တိုက်တက်ရောက်မှုများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, နောက်ထပ်အချက်များစွဲပြင်းထန်မှုသို့မဟုတ်လေ့လာနမူနာ၏အသက်အရွယ်၏ function ကိုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာ။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုသည်ယခင်အထက်တန်းကျောင်းလူငယ်များနှင့်အတူအစွဲစွဲလမ်းမှုအတိုင်းအတာကိုပထမဆုံးအကြိမ်လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အခြားအထက်တန်းကျောင်းလူငယ်များသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာပြfunctionalနာများ (ဥပမာ - ပျက်ကွက်ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု) ကြောင့်ကျောင်းဆင်းပွဲခရက်ဒစ်များမရရှိခြင်းကြောင့်ပင်မပညာရေးကိုဆက်လက်မသင်ကြားနိုင်ပါ။ “ အဆက်” အထက်တန်းကျောင်းသည်ကယ်လီဖိုးနီးယား (အမေရိကန်) ရှိအခြားရွေးချယ်စရာကျောင်းစနစ်၏အမည်ဖြစ်သည်။ အသက် ၁၆ နှစ်နှင့်အထက်လူငယ်များအားလုံးသည်အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်မှီအချိန်ပိုင်းပညာရေးကိုရရှိရန်ပြည်နယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဆက်လက်အထက်တန်းကျောင်းများကိုတီထွင်ခဲ့သည် (California16b Code Code Section 18; ၁၉၁၉ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်)၊ အထက်တန်းကျောင်းခရိုင်အတွင်း။ သူတို့နေထိုင်ကြသည်။ ဤလူငယ်များသည်ပုံမှန် (ပြည့်စုံသော) အထက်တန်းကျောင်းစနစ်မှအသက်တူရွယ်တူများထက်ဆေးရွက်ကြီးနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပိုမိုများပြားကြောင်းနှင့်အခြားစွဲလမ်းမှုနှုန်းမြင့်မားမှုကိုလည်းအစီရင်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည် (Sussman, Dent & Galaif, 1997).
ဤလေ့လာမှုတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကာကွယ်တားဆီးရေးစီမံကိန်းတွင်ပါ ၀ င်ပြီးနောက်သုံးနှစ်အကြာတွင်အထက်တန်းကျောင်းလူငယ်များကိုတိုင်းတာခဲ့သည် Sussman, Sun၊ Rohrbach & Spruijt-Metz, ၂၀၁၂) ။ ကျနော်တို့ကဖော်ထုတ်စွဲ 11 အာရုံစိုက်ခဲ့သည် Sussman et al ။ (၂၀၁၁)။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစွဲလမ်းမှု ၁၁ ခု၏ (၂၂ စွဲစွဲမှုကြီးတစ်ခုအတွင်း) တွင်ပျံ့နှံ့မှုကိုဆန်းစစ်လေ့လာသည်။ ဒီလူ ဦး ရေအကြားမှာဒီစွဲလမ်းမှုနှစ်ခု (သို့) နှစ်ခုထက်ပိုတဲ့ပူးတွဲဖြစ်ပွားမှုတွေအကြောင်းကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူငယ်အုပ်စုများကိုခွဲခြားရန်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများ၏နောက်ခံပုံစံကိုဆန်းစစ်ရန်လူတစ် ဦး ဗဟိုပြုလျှို့ဝှက်ပြောင်းလဲနိုင်သောနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Latent Class Analysis (LCA) သည်ကဏ္ivပေါင်းစုံချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်နောက်ခံအမျိုးအစားဆိုင်ရာငုပ်လျှိုးနေသည့် variable သည်လူတစ် ဦး ၏လူတန်းစားအသင်း ၀ င်မှုကိုဆုံးဖြတ်သည်နှင့်ကျောင်းသားများ၏ပစ္စည်းများကိုတုံ့ပြန်မှုအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသော profile များကိုရရှိသည်ဟုယူဆသည်။Hagenaars & McCutcheon, 2002; Lazarsfeld, ၁၉၅၀; McCutcheon၊ ၁၉၈၇) ။ LCA မော်ဒယ်များကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာစာရင်းအင်းဆိုင်ရာမသင့်လျော်သောအညွှန်းကိန်းများကိုပုံစံမကျေနပ်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ထိရောက်သောထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများနှင့်အတူဒေတာနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည့်အတန်းအရေအတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စွဲစွဲလမ်းမှုအတိုင်းအတာအတွင်းပါ ၀ င်သောဤတစ်ခုတည်းသောတုန့်ပြန်မှုပစ္စည်းများသည်ဤစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးသည်။ ဒီ matrix ကိုအတိုင်းအတာများအသုံးပြုခြင်းများအတွက် convergence တရားဝင်မှုအကြံပြုလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်စီးကရက်၊ အရက်၊ အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၊ လိင်၊ အင်တာနက်နှင့်အသင်းအဖွဲ့များကိုလေ့လာခဲ့ပြီးဤစွဲလမ်းမှုများကိုအခြားနည်းလမ်းများဖြင့်တိုင်းတာသောမေးခွန်းလွှာမှအခြားရရှိနိုင်သည့်အတိုင်းအတာများကိုလေ့လာခဲ့သည်။
ဘာသာရပ်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကာကွယ်တားဆီးရေးအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ၃ နှစ်မတိုင်မီက (၂) ကျောင်းမှ (၂၄) ကျောင်းသို့တက်ရောက်ခဲ့ဖူးသောကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်၍ အထက်တန်းကျောင်းလူငယ် (၇၁၇) ဦး ဖြစ်သည်။Sussman et al ။ , 2012) ။ ပါဝင်သူများပျမ်းမျှအသက် ၁၉.၈ နှစ် (SD = 0.8 နှစ်), 52.4% အထီးရှိကြ၏, 66.5% ကသူ့ - ထိတ်လန့်ခဲ့ကြ, 10.8% ဟစ်စပန်းနစ် White က, 22.7% သည်အခြားတိုင်းရင်းသားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 64.9% အနည်းဆုံးမိဘတစ် ဦး အထက်တန်းကျောင်းပြီးဆုံးကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကာကွယ်တားဆီးရေးစီမံကိန်းကို (၃) နှစ်ကြာနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်အချက်အလက်များကိုကောက်ယူခဲ့သည်။Sussman et al ။ , 2012) နည်းလမ်းသုံးမျိုးဖြင့် - တယ်လီဖုန်း၊ ရုံးမှစာပို့ခြင်းနှင့်အိမ်သို့လည်ပတ်ခြင်း (စစ်တမ်းများကိုအိမ်တွင်ပြုလုပ်ပြီးချက်ချင်းပြီးစီးသည်သို့မဟုတ်ရုံးသို့ပြန်ပို့ပါ) ။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာသာရပ်များခေါ်ဆိုရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ တယ်လီဖုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိသောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာသာရပ်သည်ထိုနည်းလမ်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ပါကစစ်တမ်းကိုတယ်လီဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာတိုက်မှဖြစ်စေစစ်တမ်းများကိုပြီးအောင်လုပ်ခဲ့သည်။ ကြိုးစားမှုအကြိမ်ကြိမ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာများကိုတယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်၍ မရပါကဘာသာရပ်၏အိမ်သို့စစ်တမ်းများကိုပို့ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်၏အိမ်သို့လည်းခရီးသွားခြင်းဖြင့်ဘာသာရပ်များကိုရောက်ရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ အချို့ဘာသာရပ်များသည်စစ်တမ်းများကိုအိမ်တွင်ချက်ခြင်းပြီးအောင်လုပ်ကြသည်။ အခြားဘာသာရပ်များသည်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းကိုဆက်လက်ကိုင်စွဲပြီးကျွန်ုပ်တို့ထံပြန်လည်စာပို့ခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူမှု ၇၁၇ မှုအနက် ၅၈% ကိုတယ်လီဖုန်းဖြင့်ပြီးစီးခဲ့ပြီး ၁၆% ကိုအိမ်သို့လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်ပြီးစီးခဲ့သည် (ထိုထက်ဝက်ကိုချက်ချင်းပြီးစီးခဲ့သည်၊ တစ်ဝက်သည်ပြန်လည်ပတ်မှုကာလအတွင်း ၂ ပတ်အတွင်းစာတိုက်မှပြန်ပို့ခြင်း) နှင့် ၂၆% ကိုပြန်လည်ပို့ပေးသည်။ ရုံးကနေအိမ်။
လက်ရှိလေ့လာမှု multi- တုံ့ပြန်မှုစွဲ matrix ကိုအတိုင်းအတာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤအတိုင်းအတာကတီထွင်အမျိုးအစားနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည် ကွတ် (1987)နောက်အဆင့်မြင့်အထက်တန်းကျောင်းလူငယ်များနှင့်ကောလိပ်ဘွဲ့ကြိုအတန်း ၂ တန်းနှင့်ရှေ့ပြေးသင်ခန်းစာများတွင်ပေးသောတုံ့ပြန်ချက်များပါရှိသည်။ ဘာသာရပ်များသည်ရက် ၃၀ ကြာဆေးစွဲမှုကို၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အစဉ်နှင့်အတိတ်ကာလကတည်းကထောက်ခံခဲ့ကြပြီးသူတို့တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသောနောက်ထပ်စွဲလမ်းမှုများကိုရေးသားနိုင်ခဲ့သည်။ ဤအစီအစဉ်အတိုင်းအတာ၏နောက်ဆုံးမူကွဲတွင်စမ်းသပ်လေ့လာမှုတွင်အနည်းဆုံးဘာသာရပ် ၁၀ ခုမှတင်ပြသောတုံ့ပြန်မှုများပါဝင်သည်။ တိုင်းတာမှုပြီးဆုံးပြီးနောက်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုတိုးမြှင့်ရေးအတွက်ကူညီရန်အတိုင်းအတာ၏အချက်အလက်များပါ ၀ င်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရန်တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည်။
နောက်ဆုံးအတိုင်းအတာခေါင်းစဉ်မှာ -“ တစ်ခါတစ်ရံလူတို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကိုစွဲလမ်းကြသည်။ လူများသည်အောက်ပါတို့ကိုတွေ့ကြုံခံစားရသောအခါစွဲလမ်းမှုဖြစ်ပေါ်သည် - သူတို့သည်ကောင်းမွန်စွာခံစားရရန်၊ စိတ်လှုပ်ရှားရန်အတွက်သို့မဟုတ်မကောင်းသည့်ခံစားမှုကိုရပ်တန့်ရန်အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်သည်။ သူတို့လုပ်ချင်တာတောင်မှသူတို့မလုပ်နိုင်တော့ဘူး၊ သူတို့လုပ်နေတာတွေကြောင့်သူတို့ (သို့) သူတို့ဂရုစိုက်တဲ့လူတွေမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်။ ” ခေါင်းစီးဘာသာရပ်များနောက်တွင်“ မင်းကအောက်ပါအရာတွေကိုစွဲစွဲလမ်းဖူးသလား” ဟုမေးခဲ့သည်။ “ နောက်ဆုံးရက် ၃၀ အတွင်းမှာသူတို့ဟာသင့်ကိုစွဲလမ်းနေတယ်လို့ခံစားရလား” တုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစား ၂၂ ခုပါ ၀ င်မှုကို ၂၃ ကြိမ်မြောက်နှင့်အတူပေးခဲ့သည်။ ၎င်းကသင်တန်းသားများကို“ အခြားစွဲလမ်းမှုတစ်ခုအတွက်? ကျေးဇူးပြု၍ ဖေါ်ထုတ်ပါ ____”
အမျိုးအစားများမှာစီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း၊ အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်သည့်ကိုကင်း၊ စိတ်ကြွဆေး၊ ကဖိန်းဓာတ် (ကော်ဖီသို့မဟုတ်အနီရောင် Bull ကဲ့သို့စွမ်းအင်သောက်စရာများ)၊ အစာစားခြင်း (နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအစာအလွန်အကျွံ၊ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း); လောင်းကစား အင်တာနက်ရှာဖွေခြင်း (ဝဘ်လည်ပတ်ခြင်း); ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ Myspace၊ တွစ်တာ၊ MSN၊ YM သို့မဟုတ်အခြားအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ယက်; စာပို့ခြင်း (ဆဲလ်ဖုန်းအသုံးပြုမှု); အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းများ (PS3, Xbox, Wii); အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်း၊ စတိုးဆိုင်များတွင်ဈေးဝယ်ခြင်း၊ အချစ် လိင်၊ လေ့ကျင့်ခန်း အလုပ်; ခိုးခြင်း၊ ဘာသာရေး၊ မိမိကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း (ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အရေပြားကောက်ခြင်း၊ ဆံပင်ဆွဲခြင်း); ကားမောင်းခြင်း၊ အတင်းအဖျင်း သို့မဟုတ်အခြားစွဲ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်, သာ 11 အမျိုးအစားများအတွက်ဆန်းစစ်အမျိုးအစားခန့်မှန်းရန်, အများဆုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ခဲ့ကြသည် Sussman et al ။ (၂၀၁၁) လေ့လာချက်။ အခြား / ပြင်းထန်သော (တရားမဝင်သော) မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကိုထင်ဟပ်စေရန်ဆေးခြောက်ကိုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးတုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားနှင့်ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအမျိုးအစားကိုဖန်တီးရန်အင်တာနက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် Facebook အမျိုးအစားများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းအမျိုးအစားကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအမျိုးအစားတွင်မပါဝင်ပါ။ စျေးဝယ်စွဲမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်စတိုးဆိုင်များတွင်ဈေးဝယ်ခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းဈေးဝယ်ခြင်းများပါဝင်သည်။
လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအသက် (နှစ်များတွင်)၊ ကျား / မ၊ လူမျိုးစု (လက်တင်၊ ဟစ်ဒနီကစ်၊ အဖြူ / ကော့ကေးဆပ် (သို့) အခြား [အာဖရိကန်၊ အမေရိကန် - အမေရိကန် - အမေရိကန် - အနွယ်အမေရိကန်၊ ရောထွေးသို့မဟုတ်အခြား) နှင့်မိဘပညာရေးအဆင့်အတန်းတို့ကိုစုဆောင်းခဲ့သည်။ မိဘနှစ်မျိုးစလုံးတွင်မိဘပညာကိုတိုင်းတာသည်။ ၆ တန်းအဆင့်မှ“ ၈ တန်းအထိမပြီးဆုံးသည်” အထိ“ တက်ရောက်ခဲ့သည်သို့မဟုတ်ပြီးဆုံးသောဘွဲ့လွန်ကျောင်း” အထိရရှိသည်။ အနည်းဆုံးအထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်း၏မိဘများအနည်းဆုံးဖြစ်စေ၊ မဟုတ်ဘူး။
ပြproblemနာရှိသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်အချက် ၄ ချက်ပါသောညွှန်းကိန်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။Davis က, Flett & Bes-ser, 2002) ။ လျော့နည်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုင်းတာသောပစ္စည်းအမျိုးအစားများကိုလက်ရှိလေ့လာမှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပြproblemနာအသုံးပြုမှုဖြစ်ပျက်ဘယ်လောက်မကြာခဏနှငျ့ပတျသကျ။ “ ငါအင်တာနက်ကိုငါလုပ်သင့်သည်ထက်ပိုပြီးအသုံးပြုသည်”၊ “ ငါစီစဉ်ထားတာထက်အင်တာနက်ကိုအမြဲတမ်းသုံးလေ့ရှိတယ်”၊ “ ငါလိုချင်တဲ့အချိန်တွေရှိပေမဲ့၊ အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဟုထင်ရပါသည်။ Likert အမျိုးအစားတုံ့ပြန်မှုရွေးချယ်မှုများမှာ (၁) ဘယ်တော့မှ၊ (၂) ခဲသည်၊ (၃) တစ်ခါတစ်ရံ၊ (၄) များသောအားဖြင့် (၅) အမြဲတမ်း။ CIU တည်ဆောက်မှုသည်အတွင်းပိုင်းရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (Cronbach ၏ alpha = 1) ကိုပြသည်။ ပစ္စည်း ၄ ခုစလုံးကို CIU ကိုတိုင်းတာသည်။
ကြိမ်နှုန်းကိုထိမိသည့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းအရာ ၃ ခုကိုမေးမြန်းခဲ့သည် Griffin, Botvin & Nichols, 2006; Sussman et al ။ , 2012) ။ သူတို့က“ လွန်ခဲ့သော ၁၂ လ” နှင့်“ နောက်ဆုံးရက် ၃၀” နှင့်ပတ်သက်သောအချက်နှစ်ချက်ကိုမေးမြန်းခဲ့သည် -“ …မင်းဘယ်လောက်အထိလိင်ဆက်ဆံခဲ့တာလဲ။ ” တုံ့ပြန်မှုမှာ“ ၀”၊ “ ၁”၊ “ ၂” တို့ဖြစ်သည်။ တိုးတက်မှုမှာ ၁ ဦး အထိ“ လူ ၁၀ ဦး ထက်ပိုပြီး” (တုန့်ပြန်မှုအမျိုးအစား ၁၁ ခု) တိုးတက်ခဲ့သည်။ သူတို့က“ လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၃၀ တွင်သင်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအကြိမ်မည်မျှပြုလုပ်ခဲ့သနည်း” ဟုလည်းမေးမြန်းခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်မှုများသည်“ ၀”၊ “ ၁ ကြိမ်မှ ၅ ကြိမ်”၊ “ ၆ ကြိမ်မှ ၁၀ ကြိမ်”၊ “ ၁၁ ကြိမ်မှ ၁၅ ကြိမ်”၊ “ အဆ ၃၀ ကျော်” အထိ (တုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားရှစ်ခု) တို့ဖြစ်သည်။
ဖြည့်စွက်ခြင်းအလွတ်ကွက်လပ်သုံးခုကိုမေးမြန်းခဲ့သည်၊ တစ်ခုစီသည်“ အားစိုက်သော”၊ “ အလယ်အလတ်” နှင့်“ နူးညံ့သော” လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုစီအတွက်တစ်ခုစီကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်လေ့ကျင့်ခန်းတွင်“ လွန်ခဲ့သော (၇) ရက်တာကာလအတွင်းသင်သည်အပြေး၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ဘောလုံးကစားခြင်း၊ သေတ္တာများသို့မဟုတ်ပရိဘောဂများသယ်ဆောင်ခြင်းကဲ့သို့သင်၏နှလုံးကို ၁၅ မိနစ်ကျော်ကြာလျှင်မြန်စေသည့်ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့သလား။ ” ဘာသာရပ်များသည်လွန်ခဲ့သော (၇) ရက်အတွင်းအကြိမ်အရေအတွက်ကိုဖြည့်သွင်းပြီးသားကွက်လပ်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒီပစ္စည်းသုံးမျိုးကို Godin အပန်းဖြေအချိန်လေ့ကျင့်ခန်းမေးခွန်းလွှာ (GLTEQ; Godin & Shephard, 1985).
ပါဝင်သူများအား“ ပြီးခဲ့သည့်လကမည်မျှအကြိမ်သင်အသုံးပြုခဲ့ပါသနည်း” ဟုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆေးလိပ်၊ စီးကရက်၊ အရက်၊ အရက်ယမကာ၊ ဆေးခြောက်၊ ကိုကင်း၊ အဆ0မှအဆ ၁၀၀ ကျော် (၁ = ၀ ကြိမ်၊ ၂ = ၁-၁၀ ကြိမ်၊ ၃ = ၁၁-၂၀ ကြိမ်၊ … ၁၂ = အဆ ၁၀၀ ကျော်) ကိုညွှန်ပြရန်တုန့်ပြန်မှုရွေးချယ်မှုများကိုပေးခဲ့သည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်ဆေးခြောက်အမျိုးအစား၊ စီးကရက်၊ အရက်၊ အရက်ယမကာနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု (ဆေးခြောက်၊ ကိုကင်း၊ ) တစ်ခုချင်းစီအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ရမှတ်များ (log အားလုံးအသွင်ပြောင်း) ။ ဤနေရာတွင်အသုံးပြုသောအရက်၊ ဆေးရွက်ကြီးနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု (ATOD) ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုယခင်ကချမှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဂရေဟမ် et al ။ , 1984; Needle၊ McCubbin, Lorence & Hochhauser, 1983).
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအညွှန်းကိုမေးခွန်း ၄ ခုဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဥပမာ -“ လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်း၊ အလုပ်၊ ကျောင်း၊ အိမ်တွင်သင်၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်သော်လည်းအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသင်ဆက်သုံးစွဲနေသလား။ ” ဟုတ်သည် - မဟုတ်ပါဒွိတုံ့ပြန်မှုများ၊ DSM-IV ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှုပြcategoriesနာအမျိုးအစားများ၏ proxy ပစ္စည်းများအဖြစ်အမှုဆောင်သည်။ ဤလေ့လာမှုအတွက်တုံ့ပြန်မှုများကိုလွန်ခဲ့သည့်နှစ်က (Cronbach ၏ alpha = .4) တွင်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုတစ်ခုတည်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွေ့အကြုံသိုလှောင်မှု (PEI-PCS;) ၏ပြreportedနာ၏အကျိုးဆက်များ Subscale ကို အသုံးပြု၍ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံတင်ပြသည့်ပြproblemနာ၏အကျိုးဆက်များကိုယခုလေ့လာမှုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ Sussman et al ။ , 1997; ဆောင်းရာသီ, Stinchfield & Henly, 1993) ။ ဤအတိုင်းတာမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကျိုးဆက် ၁၁ ခု (ဥပမာ - လွန်ခဲ့သော ၁၂ လတွင်အရက်သောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက်သို့မဟုတ်ဝယ်ယူရန်သင်၏အဝတ်အစားများ၊ လက်ဝတ်ရတနာများကဲ့သို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာပစ္စည်းများကိုအကြိမ်မည်မျှရောင်းစားခဲ့သနည်း) ကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ 11 = အဘယ်သူအားမျှ 12 = မကြာခဏ [4 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြိမ်]) ။ ဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းများကိုအလွဲသုံးစားမှုကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် PEI ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျု (NIDA) ကအကြံပြုခဲ့သည်။ဆောင်းရာသီ et al ။ , 1993) ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကျိုးဆက်များကဏ္scခွဲသည်အင်တာဗျူးမှဆင်းသက်လာသည့်ရောဂါရှာဖွေသည့်အုပ်စုများအကြားကောင်းမွန်သောခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုတရားဝင်သည် (ဥပမာ၊ ရောဂါလက္ခဏာ၊ အလွဲသုံးစားမှု၊ မှီခိုမှုမရှိ။ point biserial ဆက်စပ်မှု = .72) ။ ၎င်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာရောဂါအား၎င်း၏အရှည် (ပစ္စည်း ၁၁ ခုသာ) ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုထက်မကပိုမိုထိရောက်နိုင်သောကြောင့်အကဲဖြတ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောမိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ နှုန်း se, နှင့်၎င်း၏မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အတော်လေးမြင့်မားသောခန့်မှန်း (ဆောင်းရာသီ et al ။ , 1993).
လေ့လာမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဟယ်လ်စင်ကီကြေငြာချက်နှင့်အညီပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များကို၎င်းတို့၏ပါ ၀ င်မှုသည်မိမိဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအပြစ်ပေးခြင်းမရှိဘဲပါ ၀ င်မှုမှရုပ်သိမ်းနိုင်သည်ဟုအသိပေးခဲ့သည် ဘာသာရပ်များအားလုံးအတွက်တုံ့ပြန်မှု၏လျှို့ဝှက်မှုကိုအလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။ မေးခွန်းလွှာများကိုကွန်ပျူတာဖြင့်သာနံပါတ်ဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ ပေးထားသောတုံ့ပြန်မှုများကိုတရား ၀ င်ကာကွယ်ရန်လျှို့ဝှက်ထားသည့်လက်မှတ်ရရှိထားကြောင်းကိုလည်းဘာသာရပ်များအားအသိပေးခဲ့သည်။ တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယား - ကျန်းမာရေးသိပ္ပံကျောင်းပရဝုဏ်ရှိအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့သည်ဤလေ့လာမှုကိုအတည်ပြုပြီးနှစ်စဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များအားလုံးကိုလေ့လာမှုအကြောင်းအသိပေးပြီးအားလုံးသည်အသိပေးသဘောတူညီချက်ပေးခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ကဲ့သို့တူညီသော 11 စွဲအမျိုးအစားဖန်တီးခဲ့သည် Sussman et al ။ (၂၀၁၁) ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ဤစွဲလမ်းမှု ၁၁ ခုအနက်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောရက် ၃၀ ပျံ့နှံ့မှုသည် ၇၉.၂% နှင့် ၆၁.၅% အသီးသီးရှိသည်။ ရက်ပေါင်း (၃၀) နှင့်နှစ် (၃၀) အတွင်းစွဲလမ်းနေသည့်စွဲလမ်းမှုနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောတွဲဖက်မှုများသည် ၆၁.၅% နှင့် ၃၇.၇% အသီးသီးရှိသည်။ တစ်သက်တာစွဲစွဲလမ်းမှု၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်သည် 30 (SD = 2.13) နှင့်ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပေါင်း 30 အတွင်းပျမ်းမျှစွဲအရေအတွက် 1.48 (SD = 1.68) ။ အစဉ်အဆက်နှင့်နောက်ဆုံးရက်ပေါင်း ၃၀ ပျံ့နှံ့မှုနှင့်တွဲဖက်ဖြစ်ပျက်မှုတို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောစွဲလမ်းမှုပေါင်း ၂၂ ခုအထိအမျိုးအစားအရေအတွက်ကို ၈၄.၈% နှင့် ၆၈.၂% နှင့် ၇၂.၀% နှင့် ၅၁.၂% သို့တိုးမြှင့်ခြင်း (အနည်းငယ်မြင့်မားသည်) ။
အမြင့်ဆုံးပျံ့နှံ့မှုမှအနိမ့်ဆုံးပျံ့နှံ့မှုအထိစွဲစွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းမှုစွဲစွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းခဲ့မှုမှာအချစ် (၃၄.၃%)၊ အင်တာနက် (၂၉.၃%)၊ အခြား / ခဲယဉ်းသောဆေးများ (၂၉.၂%)၊ လေ့ကျင့်ခန်း (၂၇.၂%)၊ စီးကရက် (၂၄.၃%) တို့ဖြစ်သည်။ ), လိင် (၂၄.၁%)၊ အစာစားခြင်း (၂၃.၄%)၊ အလုပ် (၂၀.၆%)၊ စျေးဝယ်ခြင်း (၁၇.၉%)၊ အရက် (၁၄.၈%) နှင့်လောင်းကစားခြင်း (၃.၂%) ။ အမြင့်ဆုံးပျံ့နှံ့မှုမှအနိမ့်ဆုံးပျံ့နှံ့မှုအထိနောက်ဆုံးရက် ၃၀ စွဲစွဲလမ်းမှုမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာ (၂၃.၂%)၊ အင်တာနက် (၁၈.၄%)၊ လေ့ကျင့်ခန်း (၁၇.၇%)၊ လိင် (၁၆.၅%)၊ စီးကရက် (၁၃.၄%)၊ ), အခြား / ခဲယဉ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ (11%), အလုပ် (34.3%), စျေးဝယ် (29.3%), အရက် (29.2%) နှင့်လောင်းကစား (27.2%) ။ အစဉ်အမြဲစွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်နောက်ဆုံးရက် ၃၀ စွဲမှု၏ပျံ့နှံ့မှုသည်အခြားစွဲမြဲနေသောဆေးစွဲမှုသည်ရက်ပေါင်း ၃၀ စွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရက် ၃၀ စွဲလမ်းမှုအတွက်အများအားဖြင့်လျော့နည်းပျံ့နှံ့နေခြင်း မှလွဲ၍ စွဲလမ်းမှုများနှင့်အတူတူနီးပါးတူညီကြသည်။
ဖော်ပြရန်ကိန်းဂဏန်းများနှင့်ဆက်စပ်မှုမြှင့်တင်မှုများအားလုံးကို SAS ဗားရှင်း ၉.၃ တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။SAS Institute မှ Inc ကို, 2012-2013) ။ Chi-square နှိုင်းယှဉ်မှု ၁၁ ခုအနက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ရက် ၃၀ နှင့်နောက်ဆုံး ၃၀ နှစ်လုံးလုံးစွဲခြင်းအတွက်ယေဘုယျနည်းလမ်း (တယ်လီဖုန်းနှင့်စက္ကူပြီးစီးခြင်း) ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နှိုင်းယှဉ်မှု ၂၂ ခုတွင် ၅ ခုသာအရေးပါသည်။p <.05) ။ ၎င်းသည်အရက် (ရက်ပေါင်း ၃၀ ရက်နှင့် ၃၀ ရက်)၊ လိင် (ရက် ၃၀ နှင့်နောက်ဆုံး ၃၀) တို့နှင့်အရက်သောက်ခြင်း (နောက်ဆုံးရက် ၃၀) အတွက်ဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်များတွင်တယ်လီဖုန်းဖြင့်ပျံ့နှံ့မှုအစီရင်ခံစာများသည်စက္ကူမေးခွန်းများထက်နိမ့်သည်။ သိသာထင်ရှားသော်လည်းကွဲပြားခြားနားမှုပမာဏသည်အရက်နှင့်အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းအတွက် (နှိုင်းယှဉ်မှုအားလုံး ၇ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာရှိသည်) သေးငယ်သော်လည်းလိင်အတွက်ပိုမိုကြီးသည် (၁၃% သည်ထာဝရနှင့်နောက်ဆုံးရက် ၃၀ တွင်ဖြစ်သည်) ။
11 စွဲ၏ငုပ်လျှိုးနေ Class ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
Latent Class Analysis (LCA) သည်အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည့်လူ ဦး ရေအတွင်းရှိတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအုပ်စုငယ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်အတွက်အသုံးဝင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရက် ၃၀ အပြုအမူများ (dichotomous (ဟုတ်ကဲ့၊ မဟုတ်ပါ) ၁၁ ရက်အားကျောင်းသားများ၏တုန့်ပြန်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ စွဲလမ်းအုပ်စုအားအမျိုးအစားခွဲခြားရန် LCA ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ) မူလတန်းအကျိုးစီးပွား၏အတန်း (ဖြစ်နိုင်ကြောင်းဘာသာရပ်များစွဲအုပ်စုတစ်စုအမျိုးအစားပိုင်သောဖြစ်နိုင်ခြေ) နှင့်အတန်းအတွင်းရှိပစ္စည်းဖြစ်နိုင်ခြေ (ဘာသာရပ်များတစ်ခုစွဲအုပ်စုအတွင်းစွဲအမျိုးအစားတစ်ခုအတွက်စေ့စပ်သောဖြစ်နိုင်ခြေ) ရှိကြ၏။ LCA သည်ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးနည်းလမ်းဖြစ်သောကြောင့်အတန်း၏တည်ဆောက်ပုံနှင့်ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယူဆချက်များမပြုလုပ်ခဲ့ပါapriori ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ရန် LCA မော်ဒယ်များကိုအပြင်းထန်ဆုံးအဆင့်အတန်းမြင့်မော်ဒယ်လ်မှစတင်ခဲ့ပြီးထပ်လောင်းသောအတန်းများတိုးပွားလာသောနောက်ဆက်တွဲမော်ဒယ်များ မှစတင်၍ အပြန်အလှန်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးစံပြမသင့်လျော်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်စာရင်းအင်းညွှန်းကိန်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Pearson chi-square၊ ဖြစ်နိုင်ခြေအချိုး chi-square, Akaike Information Criterion (AIC; Akaike၊ ၁၉၈၇), Bayesian ပြန်ကြားရေးစံ (BIC; Schwartz, ၁၉၈၇အရောအနှောဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက် Lo – Mendell-Rubin ဖြစ်နိုင်ချေအချိုးစမ်းသပ်မှု (LMR; Lo, Mendell & Rubin, 2001) နှင့် entropy တန်ဖိုးများ။ LCA မော်ဒယ်များကို MPlus ဗားရှင်း 6.0 ဆော့ဖ်ဝဲပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြု၍ စမ်းသပ်ခဲ့သည် (Muthen & Muthen, 2004).
ကျနော်တို့ Class2နှင့် Class3အကြားခြားနားချက်ကိုရှာဖွေရန်ပျက်ကွက် (p တစ် ဦး နှစ် ဦး - လူတန်းစားဖြေရှင်းချက်အကြံပြုထားတဲ့ = .72) ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်စွဲနှင့် Non- စွဲဘာသာရပ်များအကြားစာရင်းအင်းကွဲပြားခြားနားမှုကိုထောက်ပံ့ပေး; ဆိုလိုသည်မှာ Class 10 ဘာသာရပ်များ၏ ၁၀% အောက်သည်စွဲလမ်းမှု ၁၁ ခုအနက် (၆% ထက်နည်းသောအရာက ၈ ခုကိုထောက်ခံကြောင်း) ကိုထောက်ခံသည်။ Class 1 ဘာသာရပ်များ၏ ၂၁% ကျော်သည်အရက်မှလွဲသောစွဲလမ်းမှု ၁၁ ခု၏ (၁၄%) ကိုထောက်ခံသည်။ နှင့်လောင်းကစား (၄.၃%) ။ အပိုဆောင်းမထိုက်မတန်ညွှန်းကိန်း 11- လူတန်းစားဖြေရှင်းချက်အကျယ်ချဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ AIC က ၅၆၈.၁၅၄ နှင့်အတန်းသုံးတန်း - ၅၆၁၆.၉၂ အတွက် AIC နှင့်အတူအကောင်းဆုံး - သင့်လျော်သောမော်ဒယ်ဖြစ်သည်ဟုအကြံပြုခဲ့သည်။ Entropy သည်အတန်းအစားသုံးခုဖြေရှင်းချက် (၆၆.၅%) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နှစ်တန်းခွဲ (၆၅.၈%) အတွက်အနည်းငယ်နိမ့်သည်။ မော်ဒယ်များအကြား BIC ရမှတ်များမှာအလွန်သေးငယ်သော (အတန်းအစားနှစ်ခုအတွက် BIC = 6; သုံးတန်း - ၅၇၇၇.၁၁ အတွက် BIC) သည်အလွန်သေးငယ်သည်။
မှာပြထားတဲ့ item-response ကိုဖြစ်နိုင်ခြေတန်ဖိုးများ စားပွဲတင် 1 နှင့် ပုံ 1 နှစ်ခု -class ကိုဖြေရှင်းချက် Non- စွဲအုပ်စုများနှိုင်းယှဉ်စွဲသိသိသာသာအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူပေးကြောင်းညွှန်ပြ (McCutcheon၊ ၁၉၈၇; Muthen & Muthen, 2004) ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူတစ်ခုစီ၏အတည်ပြုချက်အတွက်လျှို့ဝှက်လူတန်းစားဖြစ်နိုင်ခြေများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ Latent Class 1 (နမူနာ၏ ၆၇.၂%) သည်စွဲလမ်းမှု ၁၁ ခုလုံးတွင် ၁၀% အောက်သာရှိသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ သူတို့ကအချစ် (၉.၁%)၊ စီးကရက် (၈.၄%) နှင့်အင်တာနက် (၈.၄%) စွဲလမ်းမှုအမြင့်ဆုံးပျံ့နှံ့ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ သူတို့ကလောင်းကစား (၀.၅%)၊ အရက် (၁.၃%) နှင့်လိင် (၂.၈%) စွဲလမ်းမှုတွင်အနိမ့်ဆုံးပျံ့နှံ့နေသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယေဘုယျအားဖြင့်စွဲလမ်းမှုပျံ့နှံ့မှုကြောင့်၎င်းကိုဆေးအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည် မစွဲသောအုပ်စု (ယေဘုယျအားဖြင့်)။
Latent Class Analysis (LCA) ၏အတန်းနှစ်ခုကိုဆက်လက်ထားရှိခြင်း
Latent Class2(နမူနာ၏ ၃၂.၈%) သည်လောင်းကစားခြင်း (၄.၃%) နှင့်အရက် (၁၄.၀%) မှအပပစ္စည်းများအားလုံးတွင် ၂၁% ကျော်နှင့်ဆေးစွဲမှုနှုန်းမြင့်မားကြောင်းတင်ပြခဲ့သည်။ ဤအုပ်စုအတွက်အမြင့်ဆုံးပျံ့နှံ့စွဲလမ်းမှုမှာအချစ် (၄၉.၇%)၊ လိင် (၄၂.၄%)၊ လေ့ကျင့်ခန်း (၄၁.၃%)၊ အင်တာနက် (၃၇.၃) နှင့်အလုပ် (၃၇.၀) တို့ဖြစ်သည်။ လောင်းကစားနှင့်အရက်သောက်ခြင်းပြင်ပတွင်စျေးဝယ်မှု (၂၁.၉%)၊ စီးကရက် (၂၂.၈%) နှင့်အစာစားခြင်း (၂၅.၈%) တွင်အနိမ့်ဆုံးပျံ့နှံ့နေသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ပစ္စည်းအားလုံးအပေါ်တွင်သာမန်အားဖြင့်ပျံ့နှံ့နေသည်၊ အထူးသဖြင့်လူမှုရေးထောက်ခံမှုအပြုအမူများကိုညွှန်ပြသောဤအုပ်စုသည်ဤအဖွဲ့သည်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းခံရနိုင်သည်။ “ ကြိုးစားအားထုတ်ပါ၊ ကြိုးစားပါ” အဖွဲ့ကစွပ်စွဲခံရသည်.
ရလဒ်များ၏နောက်အစုံအဘို့, အားလုံး pမဟုတ်ရင်အစီရင်ခံမဟုတ်လျှင် s ကို <.0001 ။ point biserial ဆက်နွယ်မှုကိုမြှောက်ဖော်ညွှန်းကိန်းတစ်ခုအားစဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းတာသောနှိုင်းယှဉ်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခု၏စွဲမက်ထရစ်ပစ္စည်း၏ထောက်ခံချက်နှင့်ဆက်စပ်မှုကိုတွက်ချက်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရက် ၃၀ အတွင်းစီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများအရမိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံခြင်းနှင့်နောက်ဆုံး ၃၀ တွင်စီးကရက်စွဲခြင်းတို့သည် ၀.30 နှင့် .30 အသီးသီးဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရက် ၃၀ အတွင်းအရက်သုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများအရမိမိကိုယ်ကိုသတင်းပို့ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံး ၃၀ ရက်အရက်သုံးစွဲမှုသည် .59 နှင့် .79 အသီးသီးရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောရက် ၃၀ ၏အရက်များသည်မိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်အရက်ကိုလွန်စွာသောက်သုံးခြင်းနှင့်နောက်ဆုံး ၃၀ တွင်အရက်ကိုစွဲလမ်းမှုသည် .30 နှင့် .30 အသီးသီးဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးရက် ၃၀ ဆေးခြောက်သို့မဟုတ်အခြား“ ခက်ခဲသော” မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများ၏အသင်းအဖွဲ့များသည်မိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်နောက်ဆုံး ၃၀ ရက်အတွင်းဆေးခြောက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတို့သည် .21 နှင့် .36 အသီးသီးဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုရောဂါသည်စီးကရက် (.30 နှင့် .30)၊ အရက် (.29 နှင့် .45) နှင့်ဆေးခြောက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု (.30 and .30) နှင့်အမြဲတမ်းစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ PEI-PCS သည်စီးကရက် (.41 နှင့် .55)၊ အရက် (.25 နှင့် .23) နှင့်ဆေးခြောက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု (.30 and .33) တို့နှင့်အမြဲတမ်းစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်းလူတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သူ၊ လွန်ခဲ့သောရက် ၃၀ အတွင်းလူတစ် ဦး နှင့်လွန်ခဲ့သောရက် ၃၀ အတွင်းလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည့်အရေအတွက်၊ အစဉ်အဆက်လိင်စွဲဖြစ်ခြင်း .12, .30 နှင့် .30 ဖြစ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းလိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်အတူဤပစ္စည်းသုံးမျိုး၏အသင်းအဖွဲ့များသည် .24, .25 နှင့် .29 တို့ဖြစ်သည်။
အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအညွှန်းကိန်းများနှင့်အတူရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းအစဉ်လိုက် (သို့) နောက်ဆုံးရက် ၃၀ browsing နှင့် Facebook item တို့သည် .30 နှင့် .41 အသီးသီးရှိသည်။ အင်တာနက်ကြည့်ခြင်း၊ အင်တာနက်လူမှုကွန်ယက်၊ အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းတို့တွင်စွဲလမ်းနေသည့်ကွန်ပျူတာနှင့်သက်ဆိုင်သောအမျိုးအစားအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ၁၃ (p အသီးသီး = .0004) နှင့် .15 ။ လွန်ခဲ့သောရက် ၃၀ အတွင်းအင်တာနက်စွဲလမ်းခြင်း၊ လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များ၊ အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းတို့ဖြင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအသင်းများသည် .30, .54, .41 နှင့် .18p အသီးသီး = .001) ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လွန်ခဲ့သည့် (၇) ရက်အတွင်းလူတစ် ဦး သည်ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်း၊ အသင့်အတင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်စွဲလန်းခြင်းအားဖြင့်အကြိမ်မည်မျှပါဝင်ပတ်သက်သည်ကိုအသင်း ၀ င်ခဲ့သည် .7 (p = .08), .01 (NS) နှင့် .01 (NS) ။ လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းဤလေ့ကျင့်ခန်းသုံးမျိုးနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုသည် .30 (ဖြစ်သည်)p = .007), .04 (NS) နှင့် .01 (NS) ။ ထို့ကြောင့်အားစိုက်သောလေ့ကျင့်ခန်းတွင်လက်ရှိပါဝင်မှုသည်လက်ရှိလေ့ကျင့်ခန်း၏စွဲလမ်းမှုနှင့်များစွာဆက်စပ်မှုရှိသည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်ဤစွဲလမ်းမှု ၁၁ ရက်၏နောက်ဆုံးရက် ၃၀ ပျံ့နှံ့မှုသည် (၅% အတွင်း) နှင့်ဆင်တူသည် Sussman et al ။ (၂၀၁၁) စီးကရက်၊ အရက်၊ လောင်းကစားနှင့်စျေးဝယ်ခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်သည့် ၁၂ လအရွယ်လူကြီးများ၏အချက်အလက်များ (အလုပ်သည်လည်း ၅.၆% သာကွဲပြားသည်) ။ Ca-nadian အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏နောက်ထပ် ၁၂ လကြာလေ့လာမှုလေ့လာချက်တွင်Konkoly Thege et al ။ , 2013), လက်ရှိရလဒ်များကိုဤတူညီသောလေးစွဲပေါင်းအလုပ်အပေါ် (5% အတွင်း) ဆင်တူသည်။ ယခင်ဆက်လက်အထက်တန်းကျောင်းလူငယ်များသည်မကြာသေးမီကအရွယ်ရောက်ပြီးသူလေ့လာမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အခြား / ခက်ခဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၊ အင်တာနက်နှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုတို့အကြောင်းပိုမိုများပြားစွာဖော်ပြခဲ့သည် (Konkoly Thege et al ။ , 2013; Sussman et al ။ , 2011) ။ ထို့အပြင်ယခင် Sussman နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များလေ့လာမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလက်ရှိနမူနာသည်အစာစားခြင်း၊ Konkoly Thege နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတိုင်းတာ။ စွဲလမ်းမှုများကိုမပြုလုပ်ခဲ့ကြပါ သို့သော်အထက်တွင်ဆက်လက်ပညာသင်ကြားနေသည့်အထက်တန်းကျောင်းလူငယ်များသည် (လက်ရှိခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၂၀% ရှိသည့်) Konkoly Thege လေ့လာမှုထက်စာလျှင်လက်ရှိစားသုံးမှုစွဲလမ်းမှုပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အစာစားခြင်းပျံ့နှံ့မှုကိုလေ့လာခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုသုံးခုအကြားအတော်လေးကြီးမားသောကွာခြားချက်သည်အစာစားခြင်းစွဲလမ်းမှုကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် (ဥပမာ၊ Sussman et al ။  အလွန်အကျွံအစာစားခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်နည်းနည်းစားတာနဲ့ Konkoly Thege et al ။ ) ။ တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောစွဲခြင်း၏ခြုံငုံပျံ့နှံ့မှုသည်လက်ရှိနမူနာများအနေဖြင့်နှိုင်းယှဉ်မှုထက် ၁၀% ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည် Konkoly Thege et al ။ (၂၀၁၃) လေ့လာမှုနှင့်ထက် 15% ပိုမိုမြင့်မား Sussman et al ။ (၂၀၁၁) လေ့လာချက်။ ၎င်းသည်ငယ်ရွယ်သောစွန့်စားမှုနမူနာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ယင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
နှစ်ခု - လူတန်းစား LCA ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြေရှင်းချက်လူတန်းစားပြဌာန်းခွင့်၏စာရင်းအင်းညွှန်းကိန်း၏ခြုံငုံပုံစံအပေါ်အခြေခံပြီးထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်အတန်းဖွဲ့စည်းပုံသည်စွဲလမ်းမှုအမျိုးမျိုးကိုမခွဲခြားထားပါ။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ၎င်းသည်ငယ်ရွယ်သောနမူနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စွဲလမ်းမှုတစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုသောသတင်းများကိုသာမကြည့်သောကြောင့် LCA သည်ရိုးရှင်းသောပုံစံကိုထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့်ဤရလဒ်များသည်ဤစွဲလမ်းမှုများစွာကိုလဲလှယ်နိုင်သည်ဟူသောအငြင်းပွားမှုကိုထောက်ခံနိုင်သည်။ တ ဦး တည်းပင်ဤ 11 စွဲတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားအဘို့အလားအလာအစားထိုးစွဲအဖြစ်အစေခံစေခြင်းငှါထင်ကြေးလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်စွဲလမ်းဘုံ neurobiological အထောက်အကူ (ဥပမာ mesolimbic dopaminergic လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်) မျှဝေသောအမှုဖြစ်ပုံပေါ်သကဲ့သို့, ဖြစ်ကောင်းနှစ်ခု -class ကိုဖြေရှင်းချက်အားလုံးအံ့သြစရာဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ (Sussman et al ။ , 2011).
ထို့အပြင်လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်စွဲအုပ်စုသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တရား ၀ င်၊ အတော်အတန်အပြုသဘောဆောင်သောလှုပ်ရှားမှုများပါ ၀ င်သည့်စွဲလမ်းမှုတွင်ပါ ၀ င်လေ့ရှိသည် (ချစ်ခြင်း၊ လိင်၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ အင်တာနက်နှင့်အလုပ်) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၊ စီးကရက် (၂၂.၈%)၊ အရက် (၁၄.၀%)၊ အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ (၂၇.၃%) နှင့်အစာစားခြင်း (၂၅.၈%) တို့သည်ဤအုပ်စုအတွင်းပျံ့နှံ့မှုနည်းပါးသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့သည်“ ကြိုးစားအားထုတ်ပါ၊ ကြိုးစားအားထုတ်ပါ” စသည်တို့ကိုစွဲစွဲနေသောအုပ်စုဟုတံဆိပ်ကပ်ခဲ့သည်။ သမားရိုးကျလှုပ်ရှားမှုပုံစံစွဲစွဲလမ်းမှု၌ဤအမြစ်တွယ်နေသောပုံစံသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများသာဖြစ်သည်။ ကွတ်, 1987; MacLaren & အကောင်းဆုံး၊ ၂၀၁၀), ပင်မှာ - အန္တရာယ်လူငယ်များ၏ပစ္စုပ္ပန်နမူနာအကြား။
သို့သော်ယခင်အလုပ်သည်ကောလိပ်လူငယ်များနှင့်ဓာတုဗေဒမှီခိုသောလူကြီးများအတွက်စွဲလမ်းမှုအမျိုးမျိုးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ Haylett et al ။ , 2004; MacLaren နှင့်အကောင်းဆုံး, 2010) ။ ထို့ပြင်ယခင်အလုပ်အချို့ကကြီးစိုးမှုလက်အောက်ခံခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ Haylett et al ။ , 2004; Sussman, 2012) ။ လူငယ်များသည်ဘဝအတွေ့အကြုံများ၊ အားနည်းချက်နှင့်ရှာဖွေလိုသောစိတ်ရင်းစေတနာများအပေါ် မူတည်၍ ပုံမှန်၊ ပျိုးထောင်မှု (ဥပမာ - အလုပ်ခွင်ဝါဒ) နှင့်အလွန်ပြင်းထန်သော (ဟက်ဒရစ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု) စွဲလမ်းမှုများကိုနှိုင်းယှဉ်။ တွေးတောဆင်ခြင်နိုင်သည်။Sussman, 2012) ။ စွဲလမ်းမှုစိတ်ကူးစိတ်သန်းသည်စွဲလမ်းမှုသည်လွဲမှားသော ဦး တည်ချက် (သို့) အလွန်အကျွံသောစိတ်ရင်းများ (ဗီဇအတိုင်း) နှင့်ကွဲပြားသောအချက်များသည်ကွဲပြားခြားနားသောယေဘုယျအစာစားချင်စိတ်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်ဟူသောထင်မြင်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။Sussman, 2012) ။ လက်ရှိရလဒ်များသည်ဆေးစွဲမှုကိုလူနေမှုပုံစံစတဲ့အခင်းအကျင်းအတွင်းမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လမ်းညွှန်မှု (သို့) ညွှန်ကြားထားသည်ဟုဆိုလိုသည်။Csikszentmihalyi & Larson, 1984; Sussman, Stacy, Ames & Freedman, 1998သိသာထင်ရှားသောအစာစားချင်စိတ်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သော လက်ရှိနမူနာအမျိုးအစားနှင့်အနာဂတ်ပုံတူပွားခြင်းနှင့်အခြားလူ ဦး ရေနှင့်အပိုထပ်ဆောင်းအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်၊ ထိုသို့သောအနည်းငယ်ဆေးစွဲမှုပုံစံ - စွဲလူတန်းစားအမျိုးအစားလေ့လာမှုများပြီးစီးခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်စီးကရက်၊ အရက်၊ အခြား / ခက်ခဲသောမူးယစ်ဆေး၊ လိင်၊ အင်တာနက်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုတစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းများသည်အခြားဆက်စပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်သိသိသာသာဆက်နွယ်နေပြီး၎င်းပစ္စည်းများ၏အခြားစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောတည်ဆောက်မှုများနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားအကြံပြုသည်။ စွဲလမ်းမှုပိုမိုရှည်လျားသောသိုလှောင်မှုနှင့်အတူနောက်ထပ်လေ့လာမှုများအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်ပေမယ့်အဆိုပါ matrix ကိုအတိုင်းအတာ conceptualization, အချို့တန်ဖိုးကိုပုံရသည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့မှာစွဲလမ်းမှုငါးခု (ဥပမာ - ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ အလုပ်) အတွက်သင့်တော်တဲ့အစီအမံများမရှိခဲ့ပါ။
လက်ရှိလေ့လာမှုမှာအနည်းဆုံးကန့်သတ်ချက်ငါးခုရှိတယ်။ ပထမအချက်အနေဖြင့်နမူနာတွင်ကွဲပြားမှုသည်ပျံ့နှံ့ပျံ့နှံ့မှုကိုခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်းစွဲလမ်းမှုပျံ့နှံ့မှုနှင့်ပူးတွဲပါ ၀ င်မှုတို့သည်စက္ကူနှင့်တယ်လီဖုန်းဖြင့်ပြီးစီးသောဒေတာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလားတူဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အသုံးပြုသော protocol ၏လျှို့ဝှက်ချက်သည်တုန့်ပြန်မှုကိုဘက်လိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ သို့သော်နမူနာကောက်ယူခြင်းကြောင့်သတင်းပို့ခြင်းဘက်လိုက်မှုများကိုမဖယ်ရှားနိုင်ပါ။
နိဒါန်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းစွဲ matrix-type ကိုအချို့သောယခင်အလုပ်များတွင်စုံစမ်းခဲ့ပြီးနောက်ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်၊ စွဲလမ်းမှု Matrix-type ပစ္စည်းများမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရန်အလုပ်များစွာလိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်အလွန်နည်းသောလေ့လာမှုများတည်ငြိမ်သောစွဲပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုအချက်များသို့မဟုတ်ငုပ်လျှိုးနေသောအုပ်စုများ၏တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုရန်တည်ရှိ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, ဒီအတိုင်းအတာအမျိုးအစားကိုကျနော်တို့ယခင်လေ့လာမှုများကဲ့သို့တူညီသောအသုံးပြုမှုကိုထိန်းသိမ်းထားပေမယ့် "စွဲ" အဖြစ်ထက် "Self- ရိပ်မိစွဲလမ်း" အဖြစ်ပိုကောင်းချေါခံရပေလိမ့်မည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုနှင့်အတူရှိခဲ့သည့်တတိယမြောက်အကန့်အသတ်မှာ LCA သို့မဟုတ်အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုများမှတစ်ဆင့်ဖော်ထုတ်ထားသောငုပ်လျှိုးနေသောအုပ်စုများ၏ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအဓိပ္ပါယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်မရှိခြင်းဖြစ်သည်။ အုပ်စုတစ်ခုစီကဘာကိုကိုယ်စားပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကောက်ယူရမယ်။ အချို့သောမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောအလုပ်များသည်စွဲလမ်းမှုအမျိုးအစားများနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်များနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ Andreassen et al ။ , 2013) ။ ဖြစ်နိုင်သည်ဤအလုပ်အမျိုးအစားသည်ဤလျှို့ဝှက်အုပ်စုများရှိအခြေခံအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ထုတ်ရန်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။ အရည်အသွေးချဉ်းကပ်နည်းများ (ဥပမာ - အာရုံစူးစိုက်အုပ်စုများ) ကိုအသုံးပြုခြင်းကအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ သီအိုရီအရဥပမာအားဖြင့်ဤစွဲလမ်းမှု ၁၁ ခုသည်တက်ကြွသောပျိုးထောင်ခြင်း (ဥပမာ၊ အင်တာနက်၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ အလုပ်)၊ တက်ကြွစွာပျော်မွေ့ခြင်းရှာဖွေခြင်း (ဥပမာလိင်၊ ချစ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်း) နှင့် passive-pleasure ရှာဖွေခြင်းကိုထင်ဟပ်စေသောအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆနိုင်သည်။ အရက်၊ စီးကရက်၊ အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၊ ဘာသာရပ်များကိုစိတ်ရင်းစေတနာစိတ်နှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အခင်းအကျင်းများစာရင်းတစ်ခုပေးခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုပုံစံအမျိုးမျိုးကိုတစ်ခုချင်းစီကိုနေရာချခြင်းတို့ကစွဲလမ်းမှု၏အတိုင်းအတာကိုချဉ်းကပ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
စတုတ္ထအကန့်အသတ်တစ်ခုကစွဲလမ်းမှုအရာများနှင့်အခြားအစီအမံများအကြားအချက်အလက်များပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကိန်းအများစုသည်သိသာထင်ရှားသော်လည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ ၄၂ ခုမှ ၂၀ သာအနည်းဆုံး .20 ၏တန်ဖိုးများကိုပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအဖြစ်အသုံးပြုသည့်အတိုင်းအတာဝယ်လိုအားအမျိုးမျိုးသို့မဟုတ်ကြီးမားသောနမူနာ၏စစ်တမ်းများကိုဖြေရှင်းရန်ပျက်ကွက်လေ့သောအခြားအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှဘာသာရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ လက်တွေ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများသည်ဤစွဲလမ်းမှုအရာများ၏တရားဝင်မှုကိုဆန်းစစ်ရန်သိသာထင်ရှားသည့်ပိုမိုထိရောက်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့တိုင်ဤသည်ပထမ ဦး ဆုံးထိုကဲ့သို့သောစာမေးပွဲဖြစ်ပြီး, ကဲ့သို့သော, အရေးကြီးပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ကွဲပြားသောစွဲလမ်းမှုတည်ငြိမ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာအချို့သောစွဲလမ်းမှုများ (ဥပမာ - အရက်) သည်အခြားသူများထက်မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများဖြစ်သည် (ဥပမာ - အလုပ် [တစ်ယောက်မှအလုပ်ပြုတ်သွားနိုင်သည်] သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်း [ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းဖြစ်နိုင်သည်] ။ ]) ။ ဤဖြစ်နိုင်ခြေကိုပိုင်းခြားသိနိုင်ရန် longitudinal data လိုအပ်သည်။ သေးသကဲ့သို့, တစ် ဦး စွဲ matrix ကို -type အမျိုးအစားအတိုင်းအတာ employ ကြောင်းအဘယ်သူမျှမ longitudinal လေ့လာမှုများရှိပါတယ်။
အနာဂတ်လေ့လာမှုများသည်ဆေးစွဲနေသည့်ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းနှင့်အချို့သောအပြုအမူများအပေါ်စွဲစွဲနေခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုအခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအချို့သောအပြုအမူများကိုစွဲလမ်းခြင်းကိုလက်ခံခြင်းနှင့်ကွဲပြားသောအသင်းအဖွဲ့များနှင့်အတူစွဲလမ်းမှုအတိုင်းအတာအပေါ်မိမိကိုယ်မိမိအစီရင်ခံမှုပျံ့နှံ့မှုသည်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ လိင်၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ စွဲလမ်းမှုအားစွဲလမ်းခြင်းကို“ အချစ်ဇာတ်လမ်း” (သို့)“ ခေတ်သစ်လူနေမှု” ဥပမာများကဲ့သို့သောလူမှုရေးပုံရိပ်များနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကိုဆက်စပ်နိုင်သည်။ ထိုစွဲလမ်းမှုသည်စီးကရက်၊ အရက်နှင့် / သို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုစွဲစွဲလမ်းခြင်းထက် ပို၍ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။ နောက်စွဲစွဲလမ်းမှုသည်လူမှုရေးပုံရိပ်များ၏“ ပုန်ကန်သော” သို့မဟုတ်“ ချုပ်တည်းမှုဆုံးရှုံးခြင်း” နှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည်။ သို့သော်လူမှုရေးပုံရိပ်များသည်အချို့သောဆေးဝါးများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုအတွက်။ ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုသည်ပိုမိုပျံ့နှံ့လာသည့်စွဲလမ်းမှုဖြစ်လာနိုင်ပြီးနောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း (ဥပမာ -“ ခေတ်သစ်ဖြစ်ခြင်း”) အပြုသဘောဆောင်သောပုံများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, ဆေးခြောက်စွဲအနာဂတ် longitudinal အလုပ်အခြားမူးယစ်ဆေးစွဲ matrix ကိုပစ္စည်းများနှင့်သီးခြားစီထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှစွဲပုံစံများအပြောင်းအလဲများသည်အနာဂတ်အလုပ်တွင်စွဲလမ်းမှုအတိုင်းအတာကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာရန်အရေးကြီးသည်။
အကျဉ်းချုပ်အနေဖြင့်လက်ရှိလေ့လာမှုသည်အထက်တန်းကျောင်းလူငယ်များအားလျှောက်ထားသည့်အတိုင်းစွဲလမ်းမှုအတိုင်းအတာကို အသုံးပြု၍ ပျံ့နှံ့မှု၊ ပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှု၊ ငုပ်လျှိုးနေသည့်လူတန်းစားဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အမျိုးမျိုးသောစွဲလမ်းမှုများ၏ပေါင်းစည်းမှုဆိုင်ရာအသိပညာဗဟုသုတများကိုပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူလက်ရှိလေ့လာမှုသည်လူငယ်များနှင့်လူကြီးများအကြားစွဲစွဲလမ်းမှုမြင့်မားခြင်းနှင့်ပူးတွဲဖြစ်ပွားခြင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ လူနေမှုပုံစံစသည့်အခြေအနေတွင်ပါ ၀ င်သောအချက်များသည်လူတို့၏စွဲလမ်းမှုကို ဦး တည်စေနိုင်ပြီး၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်သည်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားသောဆေးစွဲခြင်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်နောက်ထပ်အရင်းအမြစ်များလိုအပ်နိုင်သည်။ သို့သော်လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုကြည့်လျှင်လူအများအပြားတွင်စွဲလမ်းမှု၏“ ယေဘူယျ” ရှုထောင့်ကိုအသုံးချနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ခေတ်ပေါ်လူနေမှုပုံစံစသည့်စွဲလမ်းမှုကိုလျှော့ချရန်အတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ပြောင်းလဲမှုများလိုအပ်သည် (ဥပမာ - လုပ်ဆောင်ရန်ဖိအား၊ မိသားစုတိုးပွားမှု) ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များသည်ဤစွဲလမ်းမှုအမျိုးမျိုး၌ပါ ၀ င်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ဤနယ်ပယ်တွင်အနာဂတ်အလုပ်များစွာလိုအပ်သည်မှာအဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်စွဲလမ်းမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ခံရန်ဂရုပြုခြင်းထက် ပို၍ ကျယ်ပြန့်သည်။
ရန်ပုံငွေရှာခြင်းရင်းမြစ်များ: ဤစာတမ်းအားမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျု (DA020138) မှထောက်ပံ့ငွေဖြင့်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
စာရေးဆရာများပံ့ပိုးမှုများ: အက်စ်အက်စ်သည်လေ့လာမှုအယူအဆနှင့်ဒီဇိုင်းရေးမှု၊ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ရန်ရေးသားခြင်းတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ took မှပါဝင်ခဲ့ပြီးစီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏အဓိကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူဖြစ်သည်။ TEA သည်အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ အချက်အလက်များ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ရလဒ်များရေးခြင်းတို့တွင် ဦး ဆောင်သည်။ PS သည်အချက်အလက်များကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန်နှင့်ရလဒ်များရေးရန်အတွက်ကူညီရန်အကြီးတန်းလေ့လာသုံးသပ်သူအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သည်။ သူသည်ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ပြီးသူသည်စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏အဓိကတွဲဖက်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ JT သည်ဆွေးနွေးမှုအခန်းကဏ္ cl ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုနှင့်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကိုရှင်းလင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ LAR နှင့် DS-M တို့သည်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သောစာလုံးများကိုရေးခြင်းအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ကူညီခဲ့ပြီးစီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏တွဲဖက်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများဖြစ်သည်။ စာရေးသူအားလုံးသည်လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုအပြည့်အဝရယူနိုင်ခဲ့ပြီးအချက်အလက်များ၏သမာဓိရှိမှုနှင့်အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏တိကျမှုအတွက်တာ ၀ န်ယူခဲ့သည်။
အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခ: ဦး ဆောင်စာရေးသူသည်ဤလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သောကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်မှရောင်းချသောမူပိုင်ခွင့်ကိုရရှိသည်။ သို့သော်လက်ရှိခေါင်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပconflictိပက္ခမရှိပါ။
Akaike အိပ်ချ် Factor ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် AIC ။ စိတ်ရောဂါ။ 1987; 52: 317-332 ။
အလက်ဇန်းဒါး BK, Schweighofer ARF ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားစွဲပျံ့နှံ့မှု။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ၏စိတ်ပညာ။ 1989; 2: 116-123 ။
Andreassen CS, Griffiths က MD, Gjertsen SR, Krossbakken E, Kvam S, Pallesen S. အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အချက် (၅) ချက်အကြားဆက်စပ်မှု။ အမူအကျင့်စွဲ၏ဂျာနယ်။ 2013; 2: 90-99 ။
Christo G, Jones SL, Haylett S, Stephenson က GM, Lefever RMH, Lefever R. ပိုမိုတိုတောင်းသော PROMIS မေးခွန်းလွှာများစွာသောစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းအကဲဖြတ်ရန်အတွက်ကိရိယာတစ်ခုအားနောက်ထပ်အတည်ပြုခြင်း။ စွဲလမ်းအပြုအမူ။ 2003; 28: 225-248 ။ [PubMed]
Cook DR ။ ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ် ဦး ၏နမူနာအတွက်ကိုယ်ပိုင်ဖော်ထုတ်စွဲလမ်းမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မှု။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ၏စိတ်ပညာ။ 1987; 1: 55-61 ။
Csikszentmihalyi M, Larson R. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် - ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှပConိပက္ခနှင့်ကြီးထွားမှု။ နယူးယောက်: အခြေခံစာအုပ်များ; ၁၉၈၄ ။
Davis သည် RA, Flett GL, Besser A. ပြသနာများအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုတိုင်းတာရန်စကေးအသစ်၏အတည်ပြုချက် - အလုပ်မလုပ်မီစစ်ဆေးခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ။ 2002; 5: 331-345 ။ [PubMed]
Demetrovics Z, Griffiths MD ။ အမူအကျင့်စွဲ: အတိတ်, ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်။ အမူအကျင့်စွဲ၏ဂျာနယ်။ ၂၀၁၂; ၁း၁-၂ ။
Godin, G, Shephard RJ ။ ရပ်ရွာထဲတွင်လေ့ကျင့်ခန်းအပြုအမူကိုအကဲဖြတ်ရန်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်း။ အသုံးချအားကစားသိပ္ပံ၏ကနေဒါဂျာနယ်။ 1985; 10: 141-146 ။ [PubMed]
ဂရေဟမ် JW၊ Flay BR၊ ဂျွန်ဆင် CA၊ Hansen WB၊ Grossman LM, Sobel JL ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာသုတေသနတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု - စမ်းသပ်မှု - ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်မှုအပေါ် မူတည်၍ စီမံကိန်း SMART မေးခွန်းလွှာကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ မူးယစ်ဆေးပညာရေးဂျာနယ်။ 1984; 14: 175-193 ။ [PubMed]
Greenberg JL၊ Lewis SE၊ Dodd DK ကောလိပ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားစွဲလမ်းမှုများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုများထပ်နေသည်။ စွဲလမ်းအပြုအမူ။ 1999; 24: 565-571 ။ [PubMed]
Griffin KW, Botvin GJ, Nichols TR မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လူငယ်များအတွက်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီအတွက်ကျောင်းအခြေပြုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုတားဆီးရေးအစီအစဉ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု ကာကွယ်တားဆီးရေးသိပ္ပံ။ 2006; 7: 103-112 ။ [PubMed]
Hagenaars JA၊ McCutcheon အေသည်ငုပ်လျှိုးနေသောလူတန်းစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုအသုံးချခဲ့သည်။ ကင်းဘရစ်: ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 2002 ။
Haylett လုပ် SA, Stephenson က GM၊ Lefever RMH စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများ၌ Covariation: ပိုမိုတိုတောင်းသော PROMIS မေးခွန်းလွှာကို အသုံးပြု၍ စွဲလမ်းစေသောအရာများကိုလေ့လာခြင်း။ စွဲလမ်းအပြုအမူ။ 2004; 29: 61-71 ။ [PubMed]
Konkoly Thege B, Colman I, El-Guebaly N, Hodgins DC, Patten S, Schopflocher D, Wolfe J, အပြုအမူနှင့်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သောစွဲလမ်းမှု၏တောရိုင်း C. ပျံ့နှံ့မှု - ကနေဒါမှပဏာမလေ့လာမှု။ အမူအကျင့်စွဲ၏ဂျာနယ်။ 2013;2(ပျော့ပျောင်း): 18 ။
Lazarsfeld PF ။ ငုပ်လျှိုးနေဖွဲ့စည်းပုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ယုတ္တိနှင့်သင်္ချာအခြေခံအုတ်မြစ်။ ခုနှစ်တွင်: Stouffer SA, Guttman L ကို, Suchman EA, Lazarsfeld PF, Star SA, Clausen JA, အယ်ဒီတာများ။ တိုင်းတာခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းခြင်း: ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလူမှုရေးစိတ်ပညာလေ့လာမှုများ။ Vol ။ 4. Princeton, NJ: Princeton University Press; 1950 စစ။ 365-412 ။ အခန်း ၁၀ ။
Lo Y, Mendell N, Rubin D. အရောအနှောမော်ဒယ်တွင်ပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုစစ်ဆေးခြင်း။ ဇီဝကမ္မဗေဒ။ 2001; 88: 767-778 ။
MacLaren VV၊ အကောင်းဆုံး LA ။ ငယ်ရွယ်သောလူကြီးများတွင်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများ - ပိုမိုတိုတောင်းသော PROMIS မေးခွန်းလွှာအတွက်ကျောင်းသားစံနှုန်းများ။ စွဲလမ်းအပြုအမူ။ 2010; 35: 252-255 ။ [PubMed]
McCutcheon AL ။ လူမှုသိပ္ပံအမှတ် 07-064 အတွက်အရေအတွက်လျှောက်လွှာအပေါ် Sage တက္ကသိုလ်စက္ကူစီးရီး။ Newberry Park, CA: Sage; 1987 ငုပ်လျှိုးနေလူတန်းစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
Muthen LK, Muthen BO ။ Mplus အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်။ ၃။ Los Angeles, CA: Muthen & Muthen;3။
ဆေးထိုးအပ် R၊ McCubbin H၊ Lorence J၊ Hochhauser M. ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်မိသားစုအခြေပြုလေ့လာမှုတွင်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များကိုယ်တိုင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တရားဝင်မှု - နည်းစနစ်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ။ အဆိုပါစွဲ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။ 1983; 18: 901-912 ။ [PubMed]
SAS Institute မှ Inc. SAS / STAT ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်း ၉.၁.၃ ။ cary, NC: SAS Institute မှ၊ 9.1.3–2012 ။
Schwartz G. စံပြတစ်ခု၏အတိုင်းအတာကိုခန့်မှန်းခြင်း။ စာရင်းအင်းများ၏ရာဇဝင်။ 1987; 6: 461-464 ။
Sussman အက်စ်စတိဗ် Sussman Matilda Hellman ၏ "The the Gap!" မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူ၏ဘဝ၏အဓိကကျသောကဏ္understandingများကိုနားလည်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း - စွဲလမ်းစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု & အလွဲသုံးစားမှု။ 2012; 47: 1661-1665 ။ [PubMed]
Sussman S, Dent CW, Galaif ER ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်အန္တရာယ်မြင့်မားသောဆယ်ကျော်သက်များအကြားပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုမှုဆက်စပ်မှုများ။ ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှု၏ဂျာနယ်။ 1997; 9: 241-255 ။ [PubMed]
Sussman S, Dent CW, Stacy AW, Burton: D, Flay BR ။ ကျောင်းအခြေပြုဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်အစီအစဉ်များကိုတီထွင်ခြင်း။ သောင်းချီသပိတ်, CA: Sage; 1995 ။
Sussman S, Lisha N, Griffiths M. အစွဲများပျံ့နှံ့ခြင်း - လူများစုပြproblemနာလား၊ လူနည်းစုလား။ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးအလုပ်အကိုင်များ 2011; 34: 3-56 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Sussman S, Stacy AW, Ames SL, Freedman LB. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအန္တရာယ်မြင့်မားသောနေရာများ။ စွဲလမ်းအပြုအမူ။ 1998; 23: 405-411 ။ [PubMed]
Sussman S, Sun P, Rohrbach L, Spruijt-Metz D. သက်ကြီးရွယ်အိုဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကာကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်၏တစ်နှစ်ရလဒ်များ - စိတ်အားထက်သန်သောလူတွေ့မေးမြန်းခြင်းအားကောင်းစေသည့်အစိတ်အပိုင်းကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ ကျန်းမာရေးစိတ်ပညာ။ 2012; 31: 476-485 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Sussman S, Sussman AN ။ စွဲ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုစဉ်းစား။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သုတေသနနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနိုင်ငံတကာဂျာနယ်။ 2011; 8: 4025-4038 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဆောင်းရာသီ KC, Stinchfield RD, Henly GA ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကိုတိုင်းတာသည့်အကြေးခွံအသစ်များထပ်မံအတည်ပြုခြင်း အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်။ 1993; 54: 534-541 ။ [PubMed]